Akhriso:- Xaaska Paul Faramosa oo qirtay in Seygeeda uu aad u amaani jiray somalida “10kii qof mid baa xun”.
February 11, 2019 marqaan Faallooyinka, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 0
Qoyska Maamulihii Shirkadda DP World ee Boosaso Paul Anthony Farmosa oo u dhashay dalka Malta ayaa difaacay shacabka Soomaalida iyagoo ka digay qoraalo ay internet-ka ku baahiyeen Dad cunsuriyiin ah kuwaas oo lagu weerarayey dadka Soomaalida ah.
Sarah Formosa oo ah gabadha uu dhalay Paul ayaa sheegtay inay yihiin Soomaalida dad wanaagsan, sidaan uu mar walba u sheegi jiray aabaheed intaanan la dilin.
“Wuxuu mar walba noo sheegi jiray in 10kii qof ee Soomaali ah oo uu arko ay 8 kamid ah yihiin dad wanaagsan, halka laga yaabo 2 qof oo xun inay ku jiraan, ayey tiri Sarah Formosa oo sheegtay in ay maalmihii lasoo dhaafay jireen cunsuriyiin ku nool dalka Malta oo faafinayey qoraalo ka dhan ah Soomaalida.
“Maaha Magaca Aabahay in loo adeegsado falalka Cunsurinimada ah, dadka Soomaalida ah waa dad wanaagsan oo shaqeysta kuwooda xuna waxay lamid yihiin Cunsuriyiinta aan halkan ku heyno ee Malta” ayey tiri Sarah.
Todobad ka hor ayaa lagu dilay Boosaso Poul oo ahaa Madaxii Shirkadda P&O port ee Hoostagta Dp World.
Sawirka Hoose waa Poul oo la sawiran Qoyskiisa.
DAAWO VIDEO:Sheekh Aadan Siiro oo Muuse Biixi Waxba U Rabeen,Cid qabata malaha”
DAAWO VIDEO:Cali Khaliif Galaydh Oo Burco Hadal Muuse Biixi Ku farxin Ka Sheegay,Axmed Ismacil samatar oo U Jawaabey.
DAAWO VIDEO:Fanaan Qiso Jaceyl Yaab Leh Dhoolo Cadeynta Malyaneer Ku Noqotay
QOSOL ADUUN:Pro.A.Samatar Iyo Dr .Galaydh oo Hargeysa Isku Waraystey,Xaalkuna Ku Xun yahay”
DEG DEG: Puntland oo ku dhawaaqaysa go`aan ka dhan ah DF Soomaaliya.
DAAWO VIDEO:Faroole oo Arimo badan ka Hadlay Heshiis Puntland Iyo faderalka
Daawo:- Culimada Somaliyeed oo oo la saftay Dowladda, dhulkana kujiiday Mucaaradka “Banaanbaxyada waxaa wada qaswadayaal”.
DAAWO:- DFS oo bilaawday qabashada kulamo la isugu keenayo bulshada Rayidka si ay difaac uga dhigato duulaanka kaga yimid qolyaha Mucaaradka.
Akhriso:- Puntland oo qaadacday shir kasocda Jabuuti oo looga hadlayo arimaha Shidaalka iyo Macdanta Dalka “Dagaal cusub ee Puntland iyo DFS”.
Daawo:- Wasiirka Waxbarashada Somalia oo runta usheegay Puntland “Shahaaho aan teyda ahayn ma shaqeyso ee Puntland yaysan is waalin”.
DEG DEG: DF Soomaaliya oo Banaanbaxyo laga abaabulayo Muqdisho ku eedeysay RW Sharmaake & Xaalad….
Daawo:- Takfiirka kunool Puntland oo si adag uweeraray Hadal kasoo yeeray wasiiraka Cadaalada “Wasiirka waxa uu xidhan yahay Tuute Xisbi”.
Daawo:- Dhibaato culus oo kataagan magaalada Garoowe iyo Gaadiidleeyda qaar oo shaqo iyo hanjabaad kudhawaaqay ‘Maxaa cusub?”.